Momba anay - Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd.
Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny volana febrily 2019 ， Ao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana teknolojia indostrialy any Qingdao faritra teknolojia avo lenta, faritany Shandong, dia orinasa ara-tsiansa sy ara-teknolojia mifantoka amin'ny R&D sy famokarana fitaovana fitsaboana ao amin'ny saha POCT molekiola.
Ny orinasa dia manana atrikasa fanadiovana haavo 100 000 ary fitaovana fikarohana siantifika sy fitaovana famokarana siantifika iraisam-pirenena, ary manana atrikasa fikarohana sy fampandrosoana ary famokarana 1 200 metatra toradroa.
Ny orinasa dia manana sehatra teknolojika fikarohana asidra nukôlika roa tsy manam-paharoa (Sehatra famaritana asidra nokleômatika Isothermal, sehatra fitadiavana asidra nokleika ASEA), Ny vokatra novolavolaina tamin'ny alàlan'ity sehatra ity dia manana ny toetoetran'ny fahatsorana, hafainganana, fahamendrehana avo lenta ary fahatsapana avo. Nahomby tamin'ny fampiharana azy tamin'ny sehatra maro toy ny fahasalamana ara-pahasalamana, fiarovana ara-tsakafo, aretin'ny biby sns.
Miantehitra amin'ny sehatra ara-teknika etsy ambony, dia mamorona fitaovana fikarohana asidra nukôlika tanana izay tsy miankina amin'ny fitaovana sarotra, izay antenaina hapetaka amin'ny fikarohana ara-pitsaboana fianakaviana sy faka amin'ny ho avy.
Fepetra vaovao amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina SARS-CoV-2 sy ny satan'ny orinasa
Rehefa mitohy mivoatra ny valan'aretina manerantany, ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina dia niditra tamin'ny dingana namboarina.
Mba hahafahana mamaly araka ny tokony ho izy ny zava-misy ankehitriny sy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny andrana asidra niokrika amin'ny toe-javatra samihafa dia ilaina ny fanafainganana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny fandaminana famokarana, handefasana vokatra azo tsapain-tanana sy fitsapana haingana kokoa mety amin'ny fizahana eo an-toerana, ary manatsara ny vokatra fitsapana asidra nokraly ao amin'ny fireneko sy ny rafitra teknika.
Tamin'ny 29 Jolay, ny praiminisitra Li Keqiang dia nampiantrano fivorian'ny mpanatanteraka ao amin'ny filankevi-panjakana, mba hiantohana ny drafitra ankapobeny amin'ny fisorohana ny valanaretina sy ny fampandrosoana, dia nisy ny fandaminana mba hanamafisana bebe kokoa ny fananganana fahaiza-manao fitiliana asidra nokleika.
Nasongadin'ity fivoriana ity fa ilaina ny manetsiketsika ny ankolafy rehetra hanafaingana ny fampandrosoana sy ny famoahana ny vokatra misy fotoana fohy, fahatsapana avo ary asa mora. Manentana ny fiofanana ho an'ny olona manara-maso ary hampitombo ny hery fanaraha-maso finday, Ho an'ny fitsapana asidra nokleika an'ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana tazo, miezaha hanafohezana ny tatitra ho 4 ora.
Nandritra ny fipoahan'ny SARS-CoV-2 valan'aretina, ny ekipa Jianma Gene Technology Co., Ltd. dia niara-niasa tamin'ny University of Science and Technology sy Qingdao University ary Qingdao University mba hikaroka olana lehibe, hampivelatra ny vokatra mpamantatra asidra nokleika, ary hahatratra 30 minitra eo ho eo.
Tamin'ny 13 martsa 2020, ny kitapo COVID-19 dia nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny CE CE; tamin'ny volana Mey, nahazo ny mari-pahaizana fanondranana ilay mpanamboatra lozisialy fanandramana satroboninahitry ny Minisiteran'ny varotra any Sina.
Ny fantsom-pamantarana virtoaly fampiasana tokana novolavolain'ny orinasanay dia maharitra 3 minitra fotsiny mba hamenoana ny fanodinana santionany sy ny fitrandrahana haingana. Amin'izao fotoana izao dia vita ny fametahana sy ny famokarana ireo vokatra fitaovana fitsaboana voalohany.Ny vokatra fitiliana asidra niokleika haingana novolavolain'ny orinasa dia manafoana ny fotoana fitadiavana asidra niokrika ho 30 minitra, izay mahafeno tanteraka ny filàna nasionaly fisorohana sy fanaraha-maso ary filàna ara-tsosialy.Amin'izao fotoana izao, ny vokatra COVID-19 fitsapana haingana dia aondrana any Indonezia, Brezila ary firenena hafa, ary eken'ny mpanjifa.
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Kitapo fitsapana any Sina, Staphylococcus Aureus Nucleic Acid, Canine Parvovirus (Cp), Kitapo tsy misy fitrandrahana,